Dale Carnegie announces entry to Myanmar | Press Release - News
Dale Carnegie announces entry to Myanmar
Dale Carnegie (ဒေး ကာနေးဂီ) မြန်မာပြည်သို့ ဝင်ရောက်လာပြီ
	စတင်တည်ထောင်သူနှင့် အရောင်းရဆုံးစာအုပ်များ ရေးသားသူ Dale Carnegie (ဒေးကာနေးဂီ) ၏ ကာလသတ်မှတ်ချက်ကို ကျော်လွန်သော မူဝါဒများကို သက်တမ်း (၁၀၅) နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော ထုတ်ကုန်အမှတ်အသားကဖော်ထုတ်တင်ပြလိုက်ပါပြီ။
	Dale Carnegie (ဒေးကာနေးဂီ) ၏သင်တန်းမှ ပြည်သူများနှင့် အကျိုးတူအဖွဲ့အစည်းများအတွက် သင်တန်းအစီအစဉ်များကို ပြုလုပ်ပေးပါတော့မည်။
	မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်သည့်အချိန်သည်အမြဲတမ်းအရောင်းရဆုံးစာအုပ်ဖြစ်သည့် "How to Win Friends and Influence People" စာအုပ် အနှစ် (၈၀) ပြည့်နှင့်လည်း တိုက်ဆိုင်နေပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ၂၀၁၇ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက် --- ထင်ရှားသော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ပင်ကိုစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မှုဆိုင်ရာ သင်တန်းကို သင်ကြားပေးနေသည့် Dale Carnegie (ဒေးကာနေးဂီ) သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေရာသစ်ဖွင့်လှစ်ရန် ကြေငြာလိုက်သည်။
အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံသို့ (၁၀၅)နှစ်သက်တမ်းရှိ ကုမ္ပဏီ၏ ဝင်ရောက်လာမှုသည် (Dale Carnegie၏)အရောင်းရဆုံးစာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်သည့် How to Win Friends and Indluence People အနှစ် (၈၀) ပြည့် အချိန်တွင်ဖြစ်သည်။ Dale Carnegie Myanmar သည် လူထုနှင့် အဖွဲ့အစည်းများအတွက် သင်တန်းအစီအစဉ်များကို မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ်နှစ်ဘာသာဖြင့် သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်သည်။
"မြန်မာနိုင်ငံဟာ စီးပွားရေးထွန်းသစ်စနိုင်ငံဖြစ်သကဲ့သို့ ပြည်သူတို့ရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးကို ပံ့ပိုးတဲ့ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများအတွက်လည်း ရေခံမြေခံကောင်းတစ်ခု ဖြစ်တယ်။ လူသားအရင်းအမြစ်ပိုမို ဖွံ့ဖြိုးကောင်းမွန်လာရေးသည် တိုးတက်လျက်ရှိနေသော ပတ်ဝန်းကျင်အဝန်းအဝိုင်းအတွက် အလွန်မတန် အရေးပါသောအရာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ရန်ကုန်ရဲ့ စီးပွားရေးအဝန်းအဝိုင်းထဲမှာ နေရာ ကောင်းမွန်စွာရပြီးဖြစ်တဲ့ ခိုင်မာတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့လည်း မိတ်ဖက်ပြုလုပ်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်" ဟု Vice President ဖြစ်သူ Maguid Barakat (မာဂေးဘာရာကက်) ကပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးသော ကုမ္ပဏီများတွေမှာ (၂၄) နှစ်ကြာ လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော့် အတွေ့အကြုံအရတော့ မြန်မာလူမျိုးများ၏ ထူးခြားသော အလားအလာရှိမှုနှင့် သင်ယူလိုစိတ်၊ တိုးတက်လိုစိတ်ရှိမှုကို သိရှိလာခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်" ဟု Dale Carnegie Myanmar ၏ Managing PartnerLuc de Waegh (လုခ်ဒီဝက်ဂ်)က ပြောသည်။ "ဒီလို သိက္ခာရှိအဖွဲ့အစည်းမျိုးနှင့် ပူးပေါင်းခွင့်ရခြင်းဟာ ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်တဲ့အပြင် မြန်မာပြည်သူတွေကို ၄င်းတို့နှင့် ထိုက်တန်တဲ့ အောင်မြင်မှုမျိုးရရှိဖို့ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မယ့် ယခုလို အဖွဲ့အစည်းမျိုးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးခွင့်ရတာကလည်း ဂုဏ်ယူစရာတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ် " ဟု၎င်းက ဆိုသည်။
Dale Carnegie Myanmar မှ ဖွင့်လှစ်မည့် သင်တန်းများနှင့် အဖွဲ့အကြောင်း ပိုမိုသိရှိလိုပါလျှင် Myanmar.dalecarnegie.com သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါသည်။
Dale Carnegie(ဒေး ကာနေးဂီ) သည်
အချိန်စမ်းသပ်မှုရှိသော တစ်ကိုယ်ရည်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှု သင်တန်းများကို Dale Carnegie (ဒေးကာနေးဂီ)က သင်ကြားပို့ချပါသည်။ ယင်းသည် တစ်ဦးချင်းနှင့် လုပ်ငန်းစုများ၏ ပြောင်းလဲမှုများအတွက် ကြားခံအထောက်အပံ့ပေးသကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ပေးပြီး၊ နိစ္စဓူဝလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင် အကြောက်တရား ကင်းကင်းဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကူညီပေးသည်။ ခေါင်းဆောင်များကိုလည်း အလုပ်နှင့်ဘဝအကြား ၄င်းတို့ လိုအပ်သည့် ယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက်ပေးပါသည်။ နယူးယောက်ရှိ ဟောက်ပေါ့တွင် ဌာနချုပ်ရုံးစိုက်ပြီး၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ပြည်နယ် (၅၀) လုံးတွင်သာမက နိုင်ငံပေါင်း ၉၀ ကျော်တွင် ရုံးခွဲများထားရှိထားပါသည်။ နေ့စဉ် သင်တန်းနည်းပြ ၂၇၀၀ ကျော်က ဘာသာစကားပေါင်း (၃၀)ဖြင့် သင်တန်းပေးပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြသည်။ Dale Carnegie (ဒေးကာနေးဂီ) အနေဖြင့် အများပြည်သူတို့၏ တစ်ကိုယ်ရေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် စီးပွာရေးအခြေခိုင်မှုတို့ ဖြစ်ပေါ်လာစေခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်သည့် ကုမ္ပဏီများတိုးတက်လာစေခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း ကမ္ဘာ့တဝှမ်းရှိ လူမှုအသိုင်းအဝန်းကိုနှစ်ပေါင်းတစ်ရာကျော်ကြာ ကူညီပေးလျက်ရှိပါသည်။ ယနေ့အချိန်တွင် Dale Carnegie (ဒေးကာနေးဂီ) အနေဖြင့် ကောင်းမွန်သော အပြောင်းအလဲကို ဖန်တီးနိုင်စေရန်၊ မိမိတို့၏ အကောင်းဆုံး အရည်အချင်းများအား မည်သို့မည်ပုံ ဖော်ထုတ်ရမည်ကို နိုင်ငံတစ်ခုနှင့်တစ်ခုကြား၊ မျိုးဆက်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကြား ဖြတ်ကျော်ညွှန်ပြလျက်ရှိရာ Dale Carnegie(ဒေးကာနေးဂီ)သင်တန်းများကို ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးတွင် လူပေါင်း ၈ သန်းကျော် တက်ရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
အသေးစိတ်ပိုမိုသိရှိလိုပါက အောက်ပါအတိုင်း ဆက်သွယ်ပါ။
Luc de Waegh Managing Partner – Dale Carnegie Myanmar
ဖုန်း +၉၅၁ ၂၃၀ ၄၁ ၅၀
105-year-old brand underscores founder and bestselling author Dale Carnegie's timeless principles
- Dale Carnegie Training will be providing public and corporate training programs.
- Entry to Myanmar comes when timeless bestseller: "How to Win Friends and Influence People" celebrates its 80th anniversary
MYANMAR 4TH AUG 2017-- Dale Carnegie, the iconic global leadership and soft skills training provider, announcedanew location—Myanmar.
The 105 years old company’s entry to the Southeast Asia country comes atatime when the best seller: How to Win Friends and Influence People, celebrates its 80th anniversary. Dale Carnegie Myanmar will be providing both public and corporate training programs in Myanmar & English language.
"Myanmar is an emerging economy and the landscape for international organizations providing people skills development, which is highly needed in suchagrowing environment, is virtually open. "says Vice President Maguid Barakat. "We partnered withasolid team who are well engrained in the business community in Yangon. ."
"My 24 years’ experience running large and small companies in Myanmar has taught me about the exceptional potential of Myanmar people and their eagerness to learn and develop." Says Luc de Waegh Managing Partner of Dale Carnegie Myanmar. "It isagreat privilege to be associated with sucharespectable institution and offer Myanmar people the tools that will enable them to reach the successes they deserve"
For more information on Dale Carnegie Training Myanmar and the team, please visit Myanmar.dalecarnegie.com
Tel +951 230 41 50